15 Tababarayaasha Kubbadda Laliska ee Kulliyadda ugu Sarreeya | Dalalka Ugu Fiican
Bogga ugu weyn 15 Tababarayaasha Kubbadda Laliska ee Kulliyadda ugu Sarreeya | Dalalka Ugu Fiican
Tababarayaasha kubbadda laliska kulliyadda ee Maraykanka iyo qaar ka mid ah waddamada kale ayaa si fiican loogu magdhabaa mushahar wanaagsan iyo faa'iidooyin kale oo la mid ah kuwa ay ku raaxaystaan ​​xirfado kale oo caan ah. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu mushaharka badan warshadaha.
Inaad noqoto kubbadda laliska kulliyadda waxay la timaadaa allabaryo badan iyo waajibaadyo, taas oo la fahmi karo.
Volleyball waa cayaar xiiso leh oo ay ku raaxeystaan ​​dadka adduunka oo idil. Meel walba waxaa jooga macallimiin iyo la taliyayaal, laakiin isboortiga macallimiintooda waxaa loogu yeeraa tababarayaal. Waxaa jira tababarayaal dhowr ah oo adduunka oo dhan ah, laakiin in yar ayaa si fiican loogu magdhabaa isboortiga kubbadda laliska.
Maqaalkani wuxuu diiradda saari doonaa tababarayaasha kubbadda laliska kulliyadda ee ugu mushaarka badan macluumaadka kale ee ku saabsan xirfadda. Nala joog
Ku saabsan kubbadda laliska
Waa Maxay Xirfadaha Loo Baahan Yahay Tababarayaasha Kubbadda Laliska Kulliyadda Lacagta Ugu Badan?
Tababarayaasha Laliska ma yihiin kuwo mushahar fiican leh?
4 Sababood Oo Muhiim U Ah In Tababarayaasha Laliska Kulliyadda Lacag Badan La Siiyo?
1. Waxay ka tanaasulaan waqtigooda iyo kartidooda si kor loogu qaado kulliyadaha.
2. Waxay siiyaan soo -gaadhis qiimo leh dugsiyadooda.
3. Cayaartu waxay la mid tahay shaqada.
4. Waxay kala maqan yihiin qoysaskooda muddo.
Intee in leeg ayaa la bixiyaa Tababarayaasha Laliska Kulliyadda?
Who is the Highest Paid College Volleyball Coach?
Immisa ayuu sameeyaa John Cook?
Waa maxay mushaharka Russ Rose sida tababaraha kubbadda laliska adduunka?
15 -ka Tababare ee Kulliyadda Ugu Lacagta Badan Kubbadda Laliska Adduunka
1. San Mateo, CA
3. Magaalada Daly, CA
4. Richmond, CA
8. Brooklyn, NY
9. Harooyinka, AK
10. Knik-Fairview, AK
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Tababarayaasha Laliska Kulliyadda ee ugu Lacagta Badan
Volleyball waa mid ka mid ah isboortiga ugu caansan Mareykanka, oo leh horyaal loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn labadaba waxaa laga heli karaa waddanka oo dhan iyo adduunka oo dhan.
Waddanka Maraykanka, gabdhaha iyo wiilasha da'doodu ka yar tahay toban jir waxay bilaabi karaan inay ciyaaraan, halka horyaallada dadka waaweyni ay u qabtaan rag iyo dumar labadaba heer madadaalo iyo tartan.
Waxa ugu horreeya ee la tixgeliyo marka la dooranayo xirfadda isboortiga heer kasta, ha ahaato carruurta ama dadka waaweyn, waa haddii tababaraha mustaqbalka uu jecel yahay la shaqaynta dadka. Qof kasta oo xiiseynaya tababarka waa inuu lahaadaa xirfado isgaarsiineed oo wanaagsan iyo sidoo kale dulqaad uu kula shaqeeyo ciyaartoy heer kasta oo karti leh.
Volleyball waa ciyaar madadaalo leh oo la ciyaaro, laakiin waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay tababarayaasha inay maareeyaan dhibaatooyinka ay la kulmaan. Intaa waxaa dheer, abaalmarinno waaweyn waa in la siiyaa tababarayaasha maanta soo saaray ciyaartoyga ugu sarreeya kubbadda laliska adduunka.
Tababarayaasha badankoodu waxay u bilaabaan si mutadawacnimo ah, waxay bartaan xeelado tabobar oo kala duwan iyagoo arkaya tababarayaal khibrad badan leh oo socodsiiya barnaamijyo marka ay marayaan darajooyinka tababarka.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira kaaliyayaasha tababbarka kubbadda laliska kuwaas oo caawiya madaxa kubbadda laliska.
Kaaliyeyaasha tababbarka kubbadda laliska ayaa door muhiim ah ka ciyaara hoggaaminta kooxda laliska.
Caawiyayaashu waxay raacaan tilmaamaha kooxda ee uu siiyay tababaraha madaxa, laakiin waxay door ka qaataan shakhsiyadooda iyo khibradooda.
Waxay leeyihiin waayo -aragnimo ciyaaro oo fiican si ay u fahmaan sida ay u eg tahay in ciyaarta la ciyaaro iyo hababka kooxda ka caawin kara inay guulaystaan.
Akhri: 15 Tababarayaasha Kubbadda Koleyga ee Kulliyadda ugu Mushaarka Badan | Dalalka Ugu Fiican
Ku shaqaynta tababaraha kuleejku waxay u baahan tahay awoodo badan oo u oggolaanaya xiriir wanaagsan oo dhex mara macallimiinta iyo ciyaartooyda. Qaar ka mid ah xirfadaha looga baahan yahay tababaraha kulliyadda waxaa ka mid ah:
Xirfadaha wada xiriirka,
Aqoonta kubbadda laliska,
Shahaadooyinka Gargaarka Degdegga ah iyo CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) waxaa looga baahan yahay ururada badankood.
XIDHIIDHKA: Sida loo tirtiro barnaamijyada iPhone 2022 | Tilmaan Buuxo
In kastoo, aysan jirin shuruud waxbarasho rasmi ah, haysashada shahaadada dugsiga sare waa faa'iido.
Dhammaan tababarayaashu waa inay maraan baaritaanka taariikhda oo ay haystaan ​​IMPACT, CAP, iyo garsoorayaasha garsooraha. Ku shaqaynta tababare ahaan waxay u tahay xamaasad iyo xiiso.
Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso, ma si fiican baa loo qaataa? Hagaag, haa, tababarayaasha kuliyada mushaar fiican baa la siiyaa.
Markay timaaddo noqoshada dugsi sare ama tababare kuliyadeed, tababarayaal badan ayaa iskaa wax u qabso ku shaqeeya si ay u helaan “lugta albaabka” ka dibna ay ka shaqaystaan ​​kor u qaadista iyaga oo qaata doorka tababare ku -xigeenka, ka shaqaynta heerka fasalka koowaad ama fasalka koowaad, ugu dambaynna noqda madaxa tababaraha kooxdooda.
Inta badan tababarayaasha madaxa dugsiga sare waxaa la siiyaa magdhow xilli, inta badan inta u dhaxaysa $ 2,500 iyo $ 3,000, in kasta oo tababarayaasha kulleejku ay kasban karaan in ka badan $ 100,000 xarumaha ugu fiican ee dalka oo dhan.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Tababaraha Kubbadda Koleyga ee Mareykanka waa $ 42,286 laga bilaabo Luulyo 30, 2021.
Taasi waxay u shaqaysaa ku dhawaad ​​$ 20.33 saacaddii waxayna u dhigantaa $ 813 toddobaad kasta ama $ 3,524 bishii.
Tababarayaasha kubbadda laliska ayaa ka mid ah shaqooyinka aadka loo bixiyo waana wax la fahmi karo awoodda ballanqaadkooda.
Inta lagu jiro tartanka, tababarayaasha badankoodu waxay u dhexeeyaan 20 illaa 30 saacadood toddobaad kasta si ay u tababaraan, cayaaraan, iyo safarka. Haddii ay heli karaan waqti ay ugu safraan ciyaar, tababarayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay sidoo kale indha indheeyaan kuwa ka soo horjeeda.
Akhri: 15ka Ciyaartoy ee Olombikada ugu Mushaharka Badan Sanadka 2022 | Faallooyinka ugu Fiican
Mid ka mid ah xirfadaha ay tahay in tababaraha kubbadda laliska kulleejku yeesho waa kartida uu ugu noolaan karo nolol allabari ah ha ahaado waqtiyo raaxo leh ama aan raaxo lahayn.
Tababaraha kubbadda laliska kuliyada ee xirfadda leh waa inuu lahaadaa soo -gaadhis weyn oo ku saabsan mawduuca. Waa inuu awoodi karaa inuu yeesho aragti cad oo ku saabsan waxa ay kooxaha kale ka fiican yihiin kooxdiisa.
Maaddaama kubbadda laliska ay tahay waxqabad isboorti oo madadaalo leh, tababaruhu waa inuu noqdaa mid hal-abuurnimo ku sameeya xirfadihiisa tababarka si uu uga caawiyo ardaydiisa inay si dhaqso leh wax u bartaan.
Sidii hore loo sheegay in tababaraha kubbadda laliska kuliyadda waa inuu ku noolaadaa nolol allabari, inta badan waxay u muuqdaan inay ka fogaadaan qoysaskooda.
Inaad noqoto macallin kaligeed waa ballanqaad aad u weyn, ma aha kaligii tababaraha kubbadda laliska ee kulliyadda.
Inta badan kaaliyeyaasha tababbarka kubbadda laliska kulliyadda ayaa iskaa wax u qabso iska bixiya, laakiin qaar ayaa la siiyaa $ 250 illaa $ 500 bishiiba xilli, iyo tababarayaasha madaxa ee kooxaha naadigu waxay kasban karaan illaa $ 1000 bishiiba xilli.
Tababarayaasha dugsiga sare sida caadiga ah waxay kasbadaan inta u dhaxaysa $ 2000 iyo $ 3000, tababarayaasha kulliyadaha sare waxay kasban karaan in ka badan $ 100,000 barnaamijyada ugu sarreeya halka kulliyadaha yaryar ay bixiyaan wax ka yar.
Tababaraha madaxa ee kooxaha ragga iyo dumarka ee dalka gudihiisa ayaa helay $ 50,000 sanadkii 2016. Halka tababaraha kubbadda laliska ee kulliyadda la siin jiray $ 42,000 sannad walba.
Intaa waxaa dheer, celceliska mushaharka sanadlaha ah ee kaaliyaha tababaraha kubbadda laliska ee Mareykanka waa $ 37,975 sanadkii, sida lagu sheegay warbixin la soo saaray, laga bilaabo Ogosto 3, 2021.
Waa kuma Kulliyada Laliska ee ugu mushaarka badan Tababaraha?
John G. Cook waa madaxa tababaraha kooxda kubbadda laliska ee Nebraska Cornhuskers. Wuxuu dhashay April 19, 1956.
XIDHIIDHKA: 21 -ka Shirkadood Ee Ugu Sarreeya Shiinaha Oo Maalgashanaya | Xogta 2022
Wuxuu laba jeer ku guuleystay abaalmarinta Tababaraha Qaranka ee AVCA. Cook wuxuu ahaa madaxa tababaraha Wisconsin Badgers todobo xilli kahor intuusan imaan Nebraska. Muddadaas, wuxuu lahaa 161–73 rikoor.
Cook wuxuu shahaadada koowaad ee taariikhda ka qaatay Jaamacadda San Diego sanadkii 1979. Sannadkii 1991, wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda San Diego State isagoo ka qaatay shahaadada Masterka ee wax -ku -oolnimada baridda iyo tababarka.
John Cook hadda waa tabobaraha kubbadda laliska ee kulliyadda ugu mushaharka badan, isaga oo haysta mushaharka aasaasiga ah $ 600,000, isaga oo ka sarreeya $575,000 oo ah madaxa tababaraha kubbadda kolayga haweenka Amy Williams.
John Cook, oo ah Lambar 6 tababbarka ugu fiican taariikhda NCAA, waa madaxa tababbarka mid ka mid ah barnaamijyada kubbadda laliska kulliyadda haweenka ee ugu caansan uguna xooggan dalka. Wuxuu kooxda ku hogaamiyay seddex horyaal qaran, afar safar oo kama dambeys ah oo NCAA ah, iyo lix kulan oo semifinal NCAA ah.
John Cook, oo ah maamulaha kooxda Nebraska ee haweenka kubbadda laliska, ayaa saxiixay qandaraas kordhin kaas oo ku sii haynayey shaqada tan iyo Janaayo 2021. Nebraska ayaa sidoo kale ku abaalmarisay Cook $ 144,000 oo u soo xarooday qandaraaska cusub. Cook waxa uu tababare u noqday kooxdiisii ​​tartanka afraad ee barnaamijkan bishii December ee la soo dhaafay.
John Cook waxa uu kasbaday lacag badan isaga oo kaliya tababare u ah kooxaha kubbada laliska. Nebrasak, Cook wuxuu kasbadaa in ka badan $675 sanadkii.
Waxa uu ku guuleystay afar horyaal. Sida iska cad waa mid ka mid ah tababarayaasha kubbadda laliska kuliyadaha ugu mushaharka badan adduunka.
Russ Rose waa tababare kubbadda laliska ee Jaamacadda Stanford ee gobolka Penn. Mushaharka tababaraha kubbadda laliska ee Stanford waa qiyaastii $38 sanadkii. Celcelis ahaan, mushaharka tababarayaasha kubbadda laliska ee gobolka Penn ee kooxda ragga ayaa ka badan $000 halka dhiggooda dumarka ahi ay qaataan. $ 26,667.
Russ waxay haysataa in ka badan todobo koob oo heer qaran ah waxayna ku guulaysatay ciyaaro badan kooxda loo magacaabay. Mushaharka Russ Rose wuxuu ahaa kaliya $14 000 markii uu xafiiska la wareegay 1979kii.
Russ Rose Waxa uu haystaa todoba koob oo heer qaran ah waxana uu ku guulaystay in ka badan ciyaaraha kale … ​​Rose waxa ay qabatay shaqada tababarka 1979kii isaga oo sameeyay Mushaarka oo ah $14,000. Sheeko taxane ah oo ku saabsan Volleytalk.proboard.com waxay soo jeedinaysaa in mushaharka Russ Rose laga yaabo $500.
Akhri: 25 Qaataha Ugu Lacag Badan Ee NFL
Boosaska tababbarka kubbadda laliska waxay abaalmarin u noqon karaan dadka u heelan oo jecel ciyaaraha. Tababarayaasha qaarkood waxay ka macaashaan shaqadooda iskaa wax u qabso.
Waxaa jira sababo kala duwan oo gacan ka geysanaya kala duwanaanshaha mushaharka tababaraha kubbadda laliska adduunka oo dhan.
Intaas waxaa sii dheer, tababaraha kubbadda laliska, darajadu way kala duwan tahay, taas oo saamaynaysa inta tababare kasta la siinayo.
15-ka ugu sarreeya tababarayaasha kubbadda laliska kubbadda koleyga ee adduunka oo dhan ayaa hoos ku taxan.
Mushahar sanadeedka $ 52,133
Bixi bil kasta $ 4,344
Lacagta usbuuclaha ah $ 1,003
Mushaharka saacaddii ah $ 25.06
Mushahar sanadeedka $ 50,365
Bixi bil kasta $ 4,197
Lacagta usbuuclaha ah $ 969
Mushaharka saacaddii ah $ 24.21
Mushahar sanadeedka $ 50,224
Bixi bil kasta $ 4,185
Lacagta usbuuclaha ah $ 966
Mushaharka saacaddii ah $ 24.15
Mushahar sanadeedka $ 48,909
Bixi bil kasta $ 4,076
Lacagta usbuuclaha ah $ 941
Mushaharka saacaddii ah $ 23.51
Mushahar sanadeedka $ 47,624
Bixi bil kasta $ 3,969
Lacagta usbuuclaha ah $ 916
Mushaharka saacaddii ah $ 22.90
Mushahar sanadeedka $ 47,495
Bixi bil kasta $ 3,958
Lacagta usbuuclaha ah $ 913
Mushaharka saacaddii ah $ 22.83
XIDHIIDHKA: 10ka ugu sarreeya ee Shaqooyinka Kalkaalinta Kharashaadka ugu sarreeya sannadka 2022
Mushahar sanadeedka $ 47,085
Bixi bil kasta $ 3,924
Lacagta usbuuclaha ah $ 905
Mushaharka saacaddii ah $ 22.64
Mushahar sanadeedka $ 46,761
Bixi bil kasta $ 3,897
Lacagta usbuuclaha ah $ 899
Mushaharka saacaddii ah $ 22.48
Mushahar sanadeedka $ 46,568
Bixi bil kasta $ 3,881
Lacagta usbuuclaha ah $ 896
Mushaharka saacaddii ah $ 22.39
Mushahar sanadeedka $ 46,509
Bixi bil kasta $ 3,876
Lacagta usbuuclaha ah $ 894
Mushaharka saacaddii ah $ 22.36
Akhri: 15 Badbaadada Lacagta Ugu Sarreysa Ee NFL | Gobolka ugu Fiican
Mushahar sanadeedka $ 45,199
Bixinta bil kasta $ 3, 766
Lacagta usbuuclaha ah $ 869
Mushaharka saacaddii ah $ 22.34
Mushahar sanadeedka $ 41,896
Bixi bil kasta $ 3,491
Lacagta usbuuclaha ah $ 805
Mushaharka saacaddii ah $ 21.9
Mushahar sanadeedka $ 43,266
Bixinta bil kasta $ 3, 605
Lacagta usbuuclaha ah $ 832
Mushaharka saacaddii ah $ 21
Mushahar sanadeedka $ 42,688
Bixinta bil kasta $ 3, 557
Lacagta usbuuclaha ah $ 820
Mushaharka saacaddii ah $ 20
Mushahar sanadeedka $ 40,884
Bixinta bil kasta $ 3, 407
Lacagta usbuuclaha ah $ 786
Waa kuma tababaraha haweenka kubbadda laliska ee Stanford?
30 -kii Janaayo, 2017, Kevin Hambly waxaa loo magacaabay tababaraha lixaad ee barnaamijka taariikhda. Sanadkii 2021, wuxuu bilaabay xilli ciyaareedkiisii ​​shanaad isagoo ah madaxa tababaraha Stanford iyo guud ahaan 13aad.
Intee in le'eg ayay tababarayaasha kubbadda laliska kulliyadda sameeyaan?
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Tababaraha Kubadda Laliska Kulliyadda ee Mareykanka waa $42,286 sanadkii.
Russ Rose miyuu ciyaaray kubbadda laliska?
Rose waxay ka qaadatay shahaadada koowaad ee jaamacadda George Williams College 1975.
Wuxuu xubin ka ahaa kooxda kubbadda laliska ee ku guuleystay horyaalnimada qaranka ee Ururka Qaranka ee Ciyaaraha Fudud (NAIA) ee 1974.
Wuxuu kabtan u ahaa kooxda labaad rikoor laba sano ah oo heer sare ah oo ah 52-5 intii uu ku qorayay qoraalkiisa tirakoobka kubbadda laliska.
Immisa ayuu sameeyay John Cook?
Cook waxaa la siiyaa $ 675,000 sanadkii Nebraska, halkaas oo uu ku guuleystay afar horyaal oo qaran.
Sideen ku noqon karaa tababare kubbadda laliska oo wanaagsan?
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka tababbarka laliska:
Ficil ahaan, noqo mid firfircoon halkii aad dadban lahayd. Tababarrada waa in lagu sameeyaa si xawli leh si loo helo saamaynta ugu fiican.
Xiriir wax ku ool ah ayaa lama huraan ah.
Waa in la isku daraa qodista iyo qashin -qubka.
Ku dhiiri geli jimicsiga habboon.
Ha ilaawin inaad fidiso muruqyadaada.
Ka dhig tababarku mid lagu raaxeysto.
Tababbarka kubbadda laliska miyuu shaqo fiican yahay?
Haa, waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan.
Maxay yihiin xirfadaha aasaasiga ah ee looga baahan yahay Volleyball -ka?
Lixda awoodood ee kubbadda laliska aasaasiga ah ee ay tahay inay ciyaartoydu kulleejku marka hore bartaan waa:
Xirfad kastaa si gaar ah ayay u gaar tahay, mana jirto shaqo runtii lagu farxo. Ballan -qaadka iyo helidda xirfadaha lagama maarmaanka u ah caawinta si loo gaaro heerka ugu sarreeya ee xirfad kasta.
Tusaale ahaan, celceliska dakhliga tababaraha isboortiga ee 2019 wuxuu ahaa $ 44,910.
Sanadka 2019, mushaharka caadiga ah ee boosaska isbarbar dhiga wuxuu ahaa $ 65,930 sanadkii macallimiinta dugsiga sare, $ 63,550 sanadkii macallimiinta dugsiga dhexe, $ 51,030 sanadkii shaqaalaha carruurta bulshada iyo qoyska, iyo $ 36,830 sanadkii shaqaalaha madadaalada iyo jirdhiska.
Tababarayaasha kubbadda laliska kulliyadda ayaa ka mid ah jagooyinka ugu mushaharka badan, iyadoo mushaharku ku kala duwan yahay goobta.
Fursadaha guusha maaliyadeed ee Tababaraha Kubbadda Koleyga ee Kulliyadda ayaa u muuqda kuwo aan dhammaad lahayn, oo mushahar celcelis ahaan ka sarreeya celceliska qaranka ee 15-ka kulliyadood ee ugu mushaharka badan.
15 Tababarayaasha Kubbadda Koleyga ee Kulliyadda ugu Mushaarka Badan | Dalalka Ugu Fiican
10 -ka Tababare Shakhsiyeed ee Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2022
Yey Yihiin Kuwa Mushaharka Ugu Badan Bixiya 2022? | Ciyaaraha Ugu Fiican
Waa maxay dallaalka koowaad? Sidee U Shaqeeya?
Mario Net Worth 2022 | Taariikh nololeedka, Dakhliga, Xirfadda, Baabuurta
15 Buugga Sheeko Jacayl Ee Ugu Fiican Adduunka | 2022
Sheekooyinka jacaylku waxay ka tarjumayaan qayb ka mid ah jiritaankeena, taas oo aynaan ka fogaan karin. Jacaylku waa dareen buuxinaya...
Sida Loo Iibsado Xulashada Wicitaannada ee Robinhood
Robinhood waa habka ugu jaban uguna fudud ee lagu maal gashado suuqa saamiyada. Laakiin ka waran haddii aad rabto…
Sida Fudud Loogu Helo Spotify Premium
Waa suurtogal inaad si toos ah ugu hesho koontada Spotify Premium iPhone kaaga ama browserka desktop-ka.
13 Barnaamijyada TV -ga Smart Smart ee ugu Fiican 2022 | Faallooyinka ugu Fiican
Sony Smart TV ayaa si tartiib tartiib ah laakiin si joogto ah ugu bislaaday sidii shabakad. In kasta oo loolanka dagaal ee u dhexeeya…
Immisa ayay ku kacaysaa in lagu rakibo makiinada weelka lagu dhaqo?
Qiimaha rakibida weelku wuu kala duwan yahay $370 ilaa $1,500, celceliska qarankana waa $970. Makiinada weel dhaqida ayaa ah kan ugu dambeeya…
10 -ka Ragga Ugu Khatarsan Adduunka 2022 -ka